भेनेजुएलामा परिवारको आधारभूत आवश्यकताका लागि महिलाहरु आफ्नो शरीर बेच्न बाध्य | SaraKhabar.com
भेनेजुएलामा परिवारको आधारभूत आवश्यकताका लागि महिलाहरु आफ्नो शरीर बेच्न बाध्य
ल्याटिन अमेरिकी देश भेनेजुएलामा हाल राजनीतिक उथलपुथल भइरहेको छ । राष्ट्रपति मादुरो सत्ताच्यूत भएको घोषणासँगै त्यहाँको संसद, सेना र अदालतमात्र होईन समग्र विश्व नै दुई ध्रुवमा विभाजित भएको देखिएका छन् । देशभित्र फैलिएको अराजक स्थितिका कारण कतिपय स्थानमा लुटपाटका घटना भएका छन् । देशमा राजनीतिक र आर्थिक संकट देखिएको छ । महँगीको मार र खानपान लगायतका अन्य आधारभूत आवश्यकताको हाहाकारले मानिसहरु देश छोडेर अन्यत्र जाने क्रम बढ्दो छ ।
लामो समयदेखि आर्थिक संकटसँग जुधिरहेको भेनेजुएलामा दैनिक उपभोग्य खानपानका सामाग्रीका साथै अन्य आवश्यक सामानहरुको मूल्यले आकास छुन थालेको छ । खानपानका सामान्य चिजकालागि समेत मारामार मच्चिएकोले भोकमारीको जस्तो हालत छ । यो अवस्थाले भेनेजुएलामा ठूलो संख्यामा मानिसहरुलाई छिमेकी देशहरुमा शरणार्थी बन्न विवश बनाएको छ । अझ महिलाहरुको हालत झन खराब हुँदै गएको पाइन्छ । उनीहरुले यस्ता समस्याहरुको सामना गर्नु परेको छ, जसको सामान्यतया कल्पनासम्म गर्न सकिन्न ।
संसारलाई सबैभन्दा धेरै मिस वर्ल्ड दिने देश हो भेनेजुएला । यसको वाबजुद यहाँ आर्थिक संकटका कारण महिलाहरु आफ्नो शरीर बेच्न विवश छन् । ती महिलाहरुले अन्तर्राष्ट्रिय मीडिया र न्यूज एजेन्सीहरु मार्फत आफ्ना पींडाले भरिएका कथा सार्वजनिक गरेका छन्, जसमा उनीहरुका मुहारमा बाध्यताका भाव प्रष्ट देख्न सकिन्छ । सि.एन.एनको एक रिपोर्टका अनुसार एक प्रशिक्षित नर्स मेरिजा (परिवर्तित नाम) ले भेनेजुएलाको हालको स्थितिमा आफ्नो परिवारको पालनपोषण गर्नका लागि देश छोडेर कोलम्बियामा शरण लिएकी थिईन् । विदेशिएपछि उनले अन्य प्रवासीहरुले झैं आफ्नी आमा र तीन सन्तानहरुलाई भेनेजुएला मै छाडेकी थिईन् ।
सि.एन.एनसँगको कुराकानीमा भेनेजुएलामा रहेका आफ्ना परिवारको खर्च उठाउन आफू एक नर्स भएको कारण कोलम्बियामा मेरिजाले एक नर्स कै जागिर पाउनेमा आशावादी रहेको बताएकी थिईन् । तर त्यहाँ पुगेपछि उनको आशा निराशामा परिणत भयो । नर्स त परको कुरो उनले सरसफाइको कामसम्म भेटिनन् । त्यस पश्चात् विवश भएर उनले यस्तो निर्णय लिनु पर्‍यो, जुन उनको लागि असम्भव जस्तै थियो । मेरिजाका अनुसार परिवारको पेट पाल्नका लागि उनले जीवनमा कहिल्यै नसोचेको वेश्यावृत्ति जस्तो घृणित काममा लाग्नु पर्‍यो । उनी आज एक पुरुषको अँगालोमा हुन्छिन् त अर्को दिन अर्को पुरुषसँग हुन्छिन् । उनकालागि यो काम जति कठिन छ, त्यति नै खतरनाक पनि छ । एक आमा भएकीले नै उनले यो कठिनाइँ र खतराको पर्वाह नगरी यो दलदलमा हामफालेकी बताएकी छिन् ।
भेनेजुएलाको परिस्थिति बिग्रीएपछि एक प्रशिक्षित नर्सको काम गरेर १५ दिनको कमाइले केवल एक प्याकेट पिठोमात्र किन्न सक्ने मेरिजाले बताएकी थिईन् । सानोसानो कुरा जुटाउन निकै मिहेनत वा परिश्रम गर्नु परिरहेको थियो । जति नै मिहेनत गरे पनि आवश्यक कुराहरु उपलब्ध हुन्छ नै भन्ने कुनै ग्यारेन्टी पनि थिएन । खराब परिस्थितिका कारण सामान किन्न पहिलो पालोको लागि मानिसहरु अघिल्लो दिनदेखि नै रातभर पसल अगाडि पालो कुरेर बस्नु पर्थ्यो । यस्तो गर्दा समेत मानिसहरुले किनमेल गर्न टोकन लिएर घण्टौं लाईनमा उभिनु पर्दथ्यो । यति परिश्रम गर्दासम्म आफूलाई आवश्यक कुरा पसलमा उपलब्ध हुन्छ नै भन्ने कुनै निश्चितता भने हुँदैन । यस्तोमा तपाईंसँग कुनै विकल्प नै हुँदैन र आफ्नो अगाडि जे हुन्छ त्यही किन्नु बाहेक अरु के उपाय हुन्छ र ?
उनी भन्छिन्, 'वर्षौंदेखि भेनेजुएलाका मानिसहरुले राष्ट्रपति निकोलस मादुरोलाई समर्थन गर्‍यो, जसले ह्यूगो चाभेजले झैं सामाजिक कार्यक्रमहरुकालागि देशको तेल सम्पदाको उपायोग गरे । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जब तेलको मूल्य खस्कियो र भेनेजुएलाको अर्थ व्यवस्था डग्मगाउन थाल्यो तब धेरै मानिसहरुले उनको विरोध गर्न शुरू गरे ।’ मेरिजाका अनुसार उनी स्वयं पनि ती मानिस मध्य कै एक हुन् । उनका सम्पूर्ण परिवारले सदा चाभेजको समर्थन गरेका थिए । तर चाभेज र वर्तमान राष्ट्रपति मादुरो दुबै देशको खराब अर्थव्यवस्थाका लागि जिम्मेवार छन् । उनीहरुले स्थितिलाई समय मै बुझेर परिस्थितिको सुधार गर्न सही व्यवस्था मिलाउन सकेनन् ।
मेरिजाका अनुसार देशमा जब राम्रो समय चलिरहेको थियो तब मानिसहरु घुम्नका लागि विदेश जान्थे, बाध्यतामा होईन । त्यस बेला त्यहाँ भोकमारी, गरीबी भन्ने थिएन । कुनै चीजको कमी या विघटन जस्तो कुनै कुरा थिएन । हाल उनी परिवारको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न देश बाहिर कोलम्बियामा भासिएका छन् । भेनेजुएलाका शरणार्थीहरु कै कारण कोलम्बियामा पनि हाल भीषण बेरोजगारीको समस्या छाएको छ । त्यहाँ पनि मानिसहरु परिवारका मूलभूत आवश्यकता जुटाउन हरेक दिन निकै मिहेनत गरिरहेका छन् ।
मेरिजा भन्छिन्, 'यदि कुनै दिन मेरी आमालाई म यहाँ के गर्दैछु भन्ने थाहा भयो भने उनलाई गहिरो चोट त अवश्य पर्ने छ तर पनि मलाई लाग्छ उनले मेरो विवशतालाई भने पक्का बुझ्ने छिन् ।' भेनेजुएला छोडेर छिमेकी देशमा यसरी शरण लिएकी मेरिजा एक्ली भने होईनन् । भेनेजुएलामा हाल उनी जस्तै कयौं अरु महिला या युवतीहरु छन्, जसलाई आफ्नो र परिवारको जीवन निर्वाहको लागि अन्य देशमा शरण लिनु परेको छ । त्यहाँ पनि कुनै काम नपाएका कारण उनीहरुले वेश्वावृत्ति जस्तो घृणित दलदलमा डुब्नु परेको छ । UNHCR द्वारा २०१८ मा जारी गरिएको एक रिपोर्टमा बताइएको थियो कि केही वर्ष यता भेनेजुएलाबाट ३० लाखभन्दा धेरै मानिसहरु विदेश पलायन भईसकेका छन् ।
मेरिजा जस्तै मेलसिया (परिवर्तित नाम) पनि करीब एक हप्ता पहिले भेनेजुएलामा आफ्ना दुई सन्तान र वृद्ध आमाबुवालाई छोडेर उज्वल भविष्यको आशाका साथ कोलम्बिया पुगेकी छिन् । परिवारको लालनपालनको लागि वेश्यावृत्तिमा संलग्न हुनु परिरहेको कथा मेलसिया संकोच मान्दै बताउँछिन् । यस्तो दलदलमा फसेर पनि आफ्नो परिवारकालागि केवल खाजाको जुगाडमात्र गर्न सकिरहेकी उनी बताउँछिन् । कहिलेकाहीं मात्र खानाको व्यवस्था हुनु वाहेक प्राय: जसो उनको परिवार राती भोकै सुत्ने गर्दछन् ।
नेपालकाे नायिका पहिलाे पटक पेरिसकाे रेड कार्पेटमा
मे २० देखि २४ सम्म फ्रान्सकाे राजधानी पेरिसमा हुने ‘क्यान्स फिल्म फेस्टिभल–२०१९’मा नेपालले पनि सहभागीता ...
नायिकाकाे नाम किन फेर्न लगाए सलमान खानले ?
बलिउड अभिनेत्री कियरा अाडवाणीले अाफ्नाे नाम परिवर्तन गरेकी छिन् । नायक सलमान खानको सल्लाहमा आफ्नो ...
शृंखलाबद्ध आत्मघाती बम विष्फोटको जिम्मेवारी इस्लामिक स्टेटले लियाे
काठमाडाैँ । आइतबार तीन सयभन्दा बढीको ज्यान जाने गरि श्रीलंकामा भएको शृंखलाबद्ध आत्मघाती बम विष्फोटको ...
पेरुका पूर्वराष्ट्रपति एलेन गार्सियाद्वारा गोली हानी आत्महत्या, आखिर किन ?
पेरु, घुस लिएको आरोप अस्वीकार गर्दै आएका पेरुका पूर्वराष्ट्रपति एलेन गार्सियाले स्वयंलाई गोली हानी ...
अमेरिकामा नेपाली परेड
न्यूयोर्क । अमेरिकाको कोलोराडो स्थित सामाजिक संस्था “हेल्पिङ हेण्ड्स” को सहयोग र “रक्की माउण्टेन फ्रेन्डस ...
कतारमा कार्यरत नेपालीकाे सेवा सुविधाकाेबारेमा सभामुख महराकाे चासाे
काठमाडौँ । कतार भ्रमणमा रहेनु भएका सभमुख कृष्णबहादुर महाराले कतारका उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री शेख ...
निजी क्षेेत्रले करकाे दर परिमार्जन गर्न सरकारलाई सुझाव
टाेखामा गाेली चल्याे, एक पक्राउ
वडा नं २२ पुरैनीमा किशोरी सशक्तिकरण केन्द्र संचालनमा
गाएक सुजन र स्मृति को नयाँ गित आउने तयारीमा